Internet Ministries - Mwari Anoshamisa
Ishe wedu Mwari Wese Wemasimbaose anoshamisa nokuti Iye zvechokwadi ndiMwari Anotyisa. Denga nenyika hazvigoni kumugadzirira nokuti Iye mukuru kudarika zvose zvatinoona uye kuziva. Madzimambo ake ane mbiri uye simba raKe harina chiyero. Baba vedu vekudenga vatsvene uye rudo rwake runogara nokusingaperi. Uchenjeri hwake hunodarika kunzwisisa kose kwevanhu. Denga nenyika zvinoramba zvichiimba nziyo dzaKe nokuti Iye akakodzera.
Hakuna mumwe akafanana naShe nokuti Iye ndiye Mambo wemadzimambo uye Ishe wemadzishe. Varume vachatsvaka rugare munguva yenhamo, asi vanozozviwana chete kana vakatsvaga Muchinda Worugare. Runyararo rwechokwadi runobva kuna Ishe Mwari Wemasimba Ose uye rugare rwake runopfuura kunzwisisa kose. Tsvaka Ishe nemoyo wako wose uye uzive kuti Ari mukati mako. Mwari ndewe iwe uye Haazokusiyi kunyange iwe uri kutambura kuburikidza nemiedzo nematambudziko. Usatya nokuti Ishe anewe uye iye akakodzera kurumbidzwa kwako.
Mwari akava mumwe wedu kuburikidza naJesu, uye kuburikidza neropa rake tave takafanirwa naMwari nokuti Akageza zvitadzo zvedu. Baba vedu vokudenga vakatidzikinura kuburikidza neGwayana. Isu takatsveneswa uye takarurama muzita raIshe Jesu Kristu uye muMweya Mutsvene waIshe wedu Mwari Wemasimbaose. Jesu Kristu ari iye musoro wekona wekutanga akaisa umwe neumwe wedu mutemberi inoshamisa uye tsvene iyo inoshumira senzvimbo yekugara yaMwari muMweya Mutsvene. Baba vedu Vatsvene vakakodzera nguva yenyu uye basa mumunda wemizambiringa waIshe.
Vimba muna Ishe nemoyo wako wose uye uzive kuti Achaita. Nguva dzose uzive kuti iwe hausi woga wekuti ngirozi dzaShe dzinoshumira kune avo vari kuwana ruponeso. Ishe anokuda uye Anemi. Ndiani angamira pamberi paIshe weHondo? Hapana aigona uye hapana aizombozvida. Tsunga moyo pakuziva kuti Izvo Guru Ndini Iye anomira iwe. Rumbidza Ishe wedu Mwari Wemasimbaose nokuti Akakodzera.
Machechi aKristu anokugamuchirai kuti munamate Ishe nesu. Tiri pano kuzoshumira Mwari uye kukubatsira mukufamba kwako naIshe. Shanyira kereke yaKristu munharaunda yako.
Nokuda kwechikonzero chaKristu,